Iskuulado ardeyda cunto nafaqo leh ma siiyan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iskuulado ardeyda cunto nafaqo leh ma siiyan
La daabacay torsdag 19 april 2012 kl 09.18
Kalabar wax ka yar iskuulada wadakaan baa ka soo baxa sharuuda ah in ay ardeyda siiyaan cunto nafaqo leh.
Boqolkii 6,3 ayaa oofiya shuruuda ah in cuntadu lahaato Vitemin-D iyo subag wanaagsan.
Sidaas waxaa muujiyey baritaan guud oo lagu sameeyey cunta iskuulada dalkoo idil.
Waxaa intaas sii dheer in iskuulo badan aysan ardeyda siinin wax ka badan halmar cunto halka uu sharciga dalkaan dhigayo in ardeyda lasiiyo ugu yaraan laba goor cunto.
Ema Pettersson oo ah madaxa mashruuc la yiraahdo cuntada iskuulka oo afka swedhiska noqonaysa Skolmat Sverige samaysayna daraasdaan ayaa welwel weyn ka muujisay in aysan iskuulada badan hirgelin talooyinka hay'ada cunta Livsmedelsverket ee ku saabsan nafaada la rabo in cuntada iskuulka lahaato.
- Nafaqo la'aanta cuntada iskuulada waxaa loo aanayn karaa waxyaabo badan, tusaale khayraad ama inkaaniyaaad la'aan taas oo ah waxay iskuulado wax ka qaban karin. Waxaan ilatahay in taasi tahay wax loobaahanyahay in loo lahaado il gooniya.
Hay'ada cuntada sadex sanno ka hor ayey aydu ku samasay baaritaaay ku ogaanaysay siday iskuulada u meelmariyaan talooyinkooda.Natiijada waxay noqotay in aysan iskuulado arintaan meelmarin taas anaguna aragnay. Marka lamaanan yaabanin natiijadaan ayey tiri.
Xogta: SVD, TT